धनगढीलाई कस्तो बनाउन चाहन्छन् गोपी हमाल ?
१५४५६ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ जेष्ठ ३१ , ०८:०५ बजे
– गोपाल हमाल (मेयर पदका उम्मेदवार)
धनगढी उपमहानगरपालिका, स्वतन्त्र
उद्योग व्यवसायमा लामो समयको अनुभव संगालेका सफल उद्योगी गोपाल हमाल धनगढीमा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमै परिचित नाम हो । उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीको उत्कृष्ट नेतृत्व गरिसकेका हमालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) पदमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी घोषणासँगै हमाल चुनावी प्रचारमा होमिएका छन् । असार १४ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसारबारे उम्मेदवार गोपाल हमालसँग पत्रकार सुशील ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
व्यवसाय गर्न छोडेर किन राजनीतिमा ?
– म व्यवसायमा सफल भए । तर, आफ्नो लागि मात्र सफल भएर भएन नि १ धनगढीको विकास गर्नु पनि मेरो दायित्व र कर्तव्य हो । व्यवस्था धेरै परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन । अवस्था परिवर्तन नगरेर दीगो विकास हुँदैन । दीगो विकास नभएर आर्थिक समृद्धि हात लाग्दैन ।
अवरुद्ध विकासलाई सही बाटोमा ल्याउन मेरो उम्मेदवारी हो । राजनीतिक दलका नेताले सकेनन्, अब हामी सामाजिक तहबाटै विकास गरौं भनेर म यो अभियानमा होमिएको हुँ ।
तपाईलाई किन मतदान गर्ने ?
– मेरो काम र प्रतिवद्धताको आधारमा मतदाताले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ । म निर्वाचित भएमा पहिलो काम भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु । यहाँको डुवान समस्या समाधान गर्छु । यहाँको कृषिलाई यान्त्रिकरणसहित व्यावसायिक कृषि गरी ‘एक वडा एक उत्पादन’को व्यवस्था गरी आयआर्जन बढाउँछु । स्वरोजगारको तालिम सञ्चालन गरेर युवा र महिलालाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई क्रमशः न्यूनिकरण गर्दै जाने नीति बनाउने छु । यहाँ पहुँचको आधारमा छिटपुट विकास भएको छ । तर, प्राथमिकताको आधारमा छैन । म निर्वाचित भएमा प्राथमिकतालाई आधार बनाउने छु ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र ग्राभेल युगको अन्त्य गरी सडक चौडा तथा गुणस्तरीय पक्की सडक बनाउनेमा लाग्छु । यहाँ स्रोतसाधनको कमी छैन, त्यसको सही परिचालन र कार्यान्वयनको कमी छ । म त्यसलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गरेर देखाउने छु । त्यसैले मतदाताले मलाई एक पटक मतदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
उत्पादित वस्तुले बजार भाउ नपाएको किसानको गुनासो छ । तपाईको पहल के रहन्छ ?
– कृषकलाई पहिले आवश्यकता अनुसारको तालिम दिनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारको सुनिश्चितता गर्ने काम मेरो हुन्छ । सडक नपुगेको ठाउँमा सडक पु¥याउने र उत्पादित सामग्रीको सही मूल्य तोकेर कृषकलाई मर्का नपर्ने गरी व्यवस्था गर्छु । कृषकलाई बजारसम्म आउनै नपर्ने गरी घरबाटै संकलनको व्यवस्था मिलाइने छ । जहाँ जे चिजको उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई त्यही ‘उत्पादन जोन’ तोकेर व्यवस्थित उत्पादनमा जोड दिन्छु ।
पर्यटकीय क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
– मोहना करिडोर चराका लागि राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । त्यसलाई व्यवस्थित गरिने छ । बेहडाबाबा यस क्षेत्रका राम्रो सम्भावना बोकेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो, त्यसको सही विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बेहडाबाबामा बाह्रै महिना धार्मिक पर्यटक पुग्ने सडक निर्माण गरेर धार्मिक पर्यटनको मुख्य केन्द्रको रुपमा विकास गर्छु । त्यसो गरेमा ग्रामीण क्षेत्रको जनजीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ । जाखोर ताल, शिवपुरी धामलगायत क्षेत्रको समूचित विकास गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तार गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचित भएमा कसरी योजना कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
– मूल सङ्लो भयो भने खोलाअवश्य सङ्लो हुन्छ । मैले बनाएको २८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रलाई अहिले प्रमुख दलका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र बनाएका छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने विकासलाई दलले स्वीकारेका छन् । विकासको बाधक कोही हुँदैन । मैले लिने आर्थिक विकासको नीतिलाई कसैले अस्वीकार गर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन । यो उपमहानगरपालिकामा खाली भएको ३ महिनामा मुङको खेती गर्ने हो भने कृषकको आम्दानी ह्वात्तै बढ्छ । यो गर्नमा कसले रोक्छ रु यहाँको खोलानाला अतिक्रमण भएको छ । त्यसको व्यवस्थापनको नीति बनिसकेको छ, कार्यान्वयन गर्न मात्र बाँकी छ । ईच्छाशक्ति र इमान्दारिता भएमा काम गर्नमा कसले अवरोध गर्छ रु मसँग ईच्छाशक्ति छ, काम गरेर देखाइदिन्छु ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न कसरी सम्भव छ ?
– पहिलो कुरा त नेतृत्वकर्ता नै सङ्लो हुनुपर्छ । त्यसका लागि म तयार छु । म निर्वाचित भएमा राज्यबाट पाउने सुविधा नै लिँदैन भनेको छुँ । म सुविधा नलिएपछि भ्रष्टाचारको प्रश्न कसरी उठ्ला रु म निर्वाचित भएमा यहाँको भ्रष्टाचारको मूल नै सुकाई दिन्छु । भ्रष्टाचारको मूल सुकेमा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । मैले कसैलाई सोध्न जरुरी छैन, कसैको दवाव सहनु छैन । यहाँको विकास र समृद्धिका लागि यहाँको स्थानीय जनताको राय सल्लाहमै काम गर्नेछु । त्यसो गर्दा त भ्रष्टाचार अन्त्य होला नि १ नेतृत्वकर्ताले भ्रष्टाचार गरेन भने कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्न हिम्मत नगर्लान् ।
धनगढी उपमहानगरलाई कसरी नमूना बनाउनुहुन्छ ?
– योजना र इच्छाशक्ति दुबै देखिएन अहिलेसम्म । धनगढीमा स्रोतसाधनको कमी छैन । नेतृत्वकर्ता जवाफदेही बनेमा विकासको काम गर्न कुनै कठिनाई छैन । धनगढी अर्धनास भइसकेको छ । तर, सर्वनास भएको छैन । यो अर्धनासलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, मेरो लक्ष्य त्यही हो । म निर्वाचित भएमा यहाँकै स्रोतसाधनले धनगढीलाई सम्पन्न बनाएर नेपालकै नमूना उपमहानगर बनाउँछु, यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।
पञ्च वर्षीय विकास योजना के छ ?
– पहिले धनगढीमा सुशासन कायम गर्छु । यहाँको डुवान समस्याको समाधान गर्छु । सघन सहरी विकासको योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्छु । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिका लागि माटोको परीक्षण गरी एग्रोफोरेस्ट्रिको कामलाई अघि बढाउछु । प्लाइउड उद्योगसँग मिलेर बिरुवा उपलब्ध गराएर किसानलाई रोप्न लगाउँछु । त्यसले पर्यावरणलाई पनि राम्रो गर्छ र किसानको आम्दानी पनि बढ्छ । किसानको लगानीको सुनिश्चितताको वातावरण बनाउँछु । तटबन्ध निर्माण गरेर यहाँको डुवान सुरक्षा सुनिश्चित गर्छु । यहाँको अर्को आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा हुने धनगढी–दिपायल सडक निर्माणमा मेरो प्राथमिकता रहन्छ । स्वप्नद्रष्टाले नै विकास गर्न सक्छ त्यो मसँग छ ।
मतदालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– जयबाबा गुरुदेवले भनेका छन्, ‘तुम बदलो जग बदला’ । जबसम्म आफू बदलिन्न, तबसम्म समाज परिवर्तन हुँदैन । धनगढी नगरवासीको चाहना नेता बदलियोस् भन्ने छ भने पहिले आफू बदलिनुपर्छ । सधैं त्यही ठाउँमा मतदान गर्नुभन्दा यसपालि मलाई मतदान गरेर हेर्नुस् । फरक परिणामको आशा छ भने मतदान पनि फरक ठाउँमा गर्नुहोस् । विकासको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने गोपी हमाललाई मतदान गरिदिनुहोस् । तपाईको चाहना र भावनाको उच्च कदर गर्दै पञ्च वर्षीय कार्यकालमा धनगढीको विकासे स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने मेरो लक्ष्य हो ।